Ozi kacha ọhụrụ gbasara FEDECO si Nigeria & ụwa | TAA
Home Tags FEDECO
Na-echere aha ndị nabatara nsọpụrụ mba
Usoro maka onyinye nke asọpụrụ mba amalitela. Echere na a ga-amata ndị natara tupu April. Ọ ga-abụ oge mbụ President Muhammadu Buhari ga-enye nkwanye ùgwù dị otú ahụ na ndị kwesịrị ekwesị na ndị Nigeria. Enweela ndị gụrụ akwụkwọ ugbu a. Ma m ghọtara na e zigara onye isi ahụ arịrịọ ọzọ maka nkwenye ikpeazụ.
Ihe a na-akpọ '1999 Constitution'
Ọ bụ akwụkwọ ọjọọ dị otú ahụ na ọ bụ naanị dabara maka ihe nkedo ahụ. A gwakwara m na nsogbu niile na nsogbu niile nke Nigeria nwere ike ịdebe na akwụkwọ ọjọọ a nke mebiri olileanya na ọchịchọ nke ọtụtụ nde ndị Nigeria.